Muujinta naqshadeynta casriga ah.
Hawo qulquli hawada hawo qaboojinta
Aerodynamic profile leh miisaan fudud.
Lambarka Moodalka Koofiyadda wadada VC301
Muuqaalka Naqshadeynta Hawada, khafiif ah, hawo qaadasho xoog leh,
Kordhi fursadaha Cashada lightweigh
Habka iyo waxqabadka jinsiyadeed-dhiirrigeliyay, oo leh qiime aan la taaban karin. Koofiyadda wadada ayaa ah mid layaab leh oo loogu talagalay wadayaasha marka ay ku raaxeystaan ​​jidadka waaweyn sida ugu dhakhsaha badan xawaaraha. qaabka caatada ah wuxuu isku daraa hawo qaadasho cajiib ah iyo sahlanaan raaxo leh oo ku habboon nidaamka iyo miisaanka fudud iyo cimri dhererka dhismaha qaab-dhismeedka, culeys kuguma dhimi doono. Koofiyadda baaskiil wadista waxaa ka buuxa som oo ah astaamaheena ugu fiican, waa mid ku habboon in la buuxiyo ku dhowaad raacid kasta. Waxaan hagaajinay naqshadeynta qeybaha kasta ee koofiyadda xitaa qaabka loogu talagalay koofiyadda lafteeda si loo yareeyo miisaanka. Sababta, waxaan sidoo kale ku xardhnay hawo aad u ballaaran oo leh marin biyood gudaha ah oo loogu talagalay awoodda ugu wanaagsan ee qaboojinta.
Waxaan ku dhafanay dhammaan joomatari koofiyadda hal xabbo oo microshell ah oo ku jira, taas oo ka dhigaysa mid fudud oo rafcaan leh, iyo habka ku-meel-gaadhka ah ee kombiyuutarka ee PC wuxuu siinayaa difaac dheeri ah inta lagu jiro fuulista.
Xakamaynta mesh qabow waxay siisaa rakibis raaxo leh oo dhaqso leh-qalalan loogu talagalay wadayaasha, mesh qabow ee dibedda suufku wuxuu ka dhigayaa mid aad u qabow leh marinka koofiyadda, waa isku xirnaanta polyfoam taas oo cufnaanta saxda ah ee bixisa habka ugu fiican ee ku habboon madaxa isticmaalaha, dhabarka dhinac waa lakab bur ah naylon u hogaansama velcro si loo sameeyo isku dhejiid aad u deggan.
Waxaan u qaabeynay koofiyadda madaxayaga caadiga ah sanado badan oo tijaabo ah anaylysis iyo xog aruurinta, waxaan ku kalsoonahay in baaxadda koofiyadda ay ku habboon tahay macaamiisha.
Koofiyaddu waa sharciyeysan yahay EN1078, CPSC iyo AS / NZS 2063: istaandarka 2020, inta lagu jiro baaritaanka guriga, koofiyaddan baaskiilku waxay si aad u wanaagsan ugu shaqeysaa baaritaanka qoyan ee qoyan iyo baaritaanka hemi oo kulul, koofiyadda miisaanka culus ee fudud ayaa xaqiijineysa amniga ugu badan ee wadayaasha.
Xarkaha ITW iyo cam-qufulka ayaa bixiya isku xidhka oo aad u adag waana sahlan tahay in lagu sii daayo hal gacan, haddii aad u baahan tahay xirmo kale oo dheeri ah, waxaan ku soo bandhigi karnaa magnet bcukle Fidlock iyo Osmar si alaabadaadu u muuqato mid ka duwan sidii hore.
Syetem-kan ku habboon wuxuu leeyahay seddex fursadood oo isku-habeyn toosan, diilbareed xariijin ah si loogu hagaajiyo xiisadda hal gacan waxaana laga sameeyaa qalab jilicsan oo adkeysi leh si looga fogaado waxyeelo inta la xirayo. Nidaamka taam ah ee Fududeeyaha iyo beddelka ayaa bixiya hagaajinta saxda ah ee ku habboonaanta.
Hore: Duubis fara badan oo PC ah ayaa ilaaliya koofiyadda mootada magaalada VU103
Xiga: Koofiyadaha MTB Baaskiil VM203
Koofiyad Baaskiil Waddo Wanaagsan
Nalalka Koofiyadda Baaskiilka
Koofiyad Baaskiil Weji Oo Buuxda
Koofiyadaha Baaskiilka Wadada
Koofiyadaha Baaskiilka Qaaliga ah